पुष्पकमल र नन्दकिशोरलाई पूर्व जनमुक्ति सेनाको पत्र: फेरि अर्को द्वन्द्व निम्तिन सक्छ !
– राजन थापा सुवास
नेपालमा भयको दशक लामो युद्धपछि द्वन्द्वपीडितहरुको समस्या समाधान गर्न सरकार र यहाँका प्रमुख राजनीतिक दलहरुले मुलुक नयाँ राजनीतिक कोर्षमा प्रवेश गर्दा पनि वास्ता गरेनन् । द्वन्द्वपीडितहरुको समस्यालाई यस्तै वेवास्था गरिने हो र छिट्टै समाधानको बाटो नखोज्ने हो भने फेरि अर्को द्वन्द निम्तनसक्छ।
राज्यले समस्याको समाधान भन्दा पनि द्वन्द्व नै चाहेको छ । द्वन्द्वपीडितहरुले उठाएको जायज मागलार्इ सम्बोधन गर्ने बाटो बिराएर राज्य उल्टै धरपकटमा उत्रिएर जबर्जस्ती द्वन्द्वतिर धकेल्ने बाटोतिर लागेको छ। हामी जस्ता परिवर्तनकारी जनमुक्ती सेनाले लडेर २४० वर्षे राजतन्त्र अन्त्य गर्नेदेखि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म को यात्रामा साथ दियौँ । त्यो महत्त्वपूर्ण भूमिका जनमुक्ती सेना नेपालले नै खेलेको हो । जनमुक्ती सेना नेपाली जनताको अधिकारको निमित्त बर्गीय दुश्मनसंग लड्दै आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर लाम्बद्व ढंगले कमान्डरको आदेशलाई स्वीकार्दै अगाडि बढ्यो ।
अगाडि बढ्दैगर्दा जनताको दुश्मनसंग लँडाइमा १७ हजार योद्धाहरुले साहादात प्राप्त गरे । १२ हजार अंगगभंग भए । हजारौँ आज पनि बेपत्ता छन् । बेपत्ता परिवार अहिले कि सास चाहियो कि, लास चाहियो भनेर अँखाभरी आँसु लिएर न्याए खोज्दै भौतारिरहेको अवस्था छ । राज्यले कुनै सत्यतथ्य छानबिन गरि सार्बजनिक गर्न सकेको छैन ।
शान्ती प्रकृया र सेना समायोजनको नाममा जनमुक्ती सेनालाई ७ वटा अस्थार्इ सिबिरमा राखियो । कथित बिदेशी (अनमिन) लाई बोर्लार प्रमाणीकरण गर्ने काम गरियो । त्यही प्रमाणीकरणबाट एउटै सिबिरमा भएका सेनाहरुलार्इ विभाजन गरेर चार हजार जना जनमुक्ती सेनालाई अयोग्यको बिल्ला भिराएर कुनै वास्ता नगरी समाजमा फर्काइयो। त्यही जनमुक्ती सेनाले लडेर ल्याएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र योग्य हुने, अनि चार हजार जना जनमुक्ती सेना कसरी अयोग्य भए ।
हाम्रै कारणले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीसम्म पुगेका डा बाबुराम घट्राई, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड योग्य भए, हामी कसरी अयोग्य ? यसको उत्तर ७ वटा डिभिजन कमान्डर, ४ जना डेपुटी कमान्डर र तत्कालीन सुप्प्रीम कमान्डर क. प्रचडले दिनुपर्छ । तत्कालीन डेपुटी कमान्डर नन्द किसोर पासाङले दिनुपर्छ । नन्दकिशोर जी, तपाईं यहि जनमुक्ती सेनाकै कारण उपराष्टपति बन्नु भएको छ । चक्रपाणी खनाल बल्देब हाम्रै कारणले कृषिमन्त्री बन्नु भएको छ, डिपुटी कमान्डर जनार्दन शर्मा हाम्रै कारणले गृहमन्त्री बन्नु भएको छ । अनन्त हाम्रै कारणले उर्जामन्त्री बन्नु भएको छ, प्रचण्ड तपार्इ हाम्रै कारणले गर्दा २ पटकसम्म प्रधान्मन्त्री बन्नु भयो ।
के कुर्सीकै लागि मात्रै थियो त १० बर्षे जनयुद्ध ? सिबिरमा खर्बौ भ्रष्टाचार गर्ने तपाईंहरु योग्य, हामी चाहिँ कसरी अयोग्य ? अब भ्रष्टाचार गर्ने तपार्इँहरुकाबिरुद्धमा ७७ वटै जिल्लामा र सर्बोच्च अदालतदेखि अख्तियारसम्म मुद्दा हाल्छौँ ।
नेपाली जनताले पसिना बगाएर ,कमाएर तिरेको करमाथि हिनामिना गर्ने अधिकार कसैलाइ छैन, वाइटबडी विमानमाथि खुलेआम ४ अर्ब ३५ करोड भ्रष्टाचार भएको पुष्टि भएको छ । तीं भ्रष्टाचारी योग्य, हामी चाहिँ कसरी अयोग्य ? द्वन्द्वपीडितहरुलार्इ सडकमा छोडेर कसरी शान्तिप्रकृयाले पुर्णता पाउला ? द्वन्द्व व्यवस्था नगरेसम्म शान्ती प्रकृयाले पूर्णता पाउने दिवासपना नदेख्दा जाती होला ।
(लेखक बहिर्गमित जनमुक्ती सेना नेपाल केन्द्रीय संघर्ष समितिका महासचिव हुन्)